Marriott Na-eme Ka Ọzụzụ Trazụ Azụ Mmadụ Ya Dịkwuo Mma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nkwari akụ na nkwari akụ » Marriott Na-eme Ka Ọzụzụ Trazụ Azụ Mmadụ Ya Dịkwuo Mma
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Marriott na-eme nzọụkwụ ọzọ na ebumnuche iji zụọ ndị mmekọ niile nọ na ụlọ ka ha mata ma meghachi omume n'ọnọdụ ịzụ ahịa ka ọ na-erule 2025.
Ụwa agbanweela nke ukwuu n'ime afọ ise kemgbe Marriott International bidoro ọzụzụ izizi.
COVID-19 ewebatala ahụmịhe ụlọ nkwari akụ na-enweghị kọntaktị na ekwentị mkpanaaka, nke nwere ike ime ka o sie ike ịchọta ndị nwere ike igosipụta ịzụ ahịa.
Emepụtara ọzụzụ ọhụrụ a na mmekorita ya na ndị lanarịrị ịzụ ahịa mmadụ.
Marriott International kwupụtara taa na Julaị 30, World Day Against Trafficking in Persons, ụlọ ọrụ ahụ ga-ewepụta ụdị mmelite ọzụzụ ọzụzụ ịzụ ahịa mmadụ-nzọụkwụ ọzọ na ebumnuche Marriott iji zụọ ndị mmekọ niile nọ na ihe onwunwe ịmata na ịzaghachi. Ihe nwere ike igosipụta ịzụ ahịa mmadụ na họtel ka ọ na -erule 2025.
Ụwa agbanweela nke ukwuu n'ime afọ ise kemgbe Marriott International bidoro ọzụzụ izizi. COVID-19 ewebatala ahụmịhe ụlọ nkwari akụ na-enweghị kọntaktị na ekwentị mkpanaaka, nke nwere ike ime ka o sie ike ịchọta ndị nwere ike igosipụta ịzụ ahịa.
Ọzụzụ ọhụrụ a na-ewulite ntọala izizi site na igosipụta modulu dabere na ọnọdụ, atụmatụ enyi na enyi, yana ịbawanye ntuziaka maka otu esi emeghachi omume na ọnọdụ nke ịzụ ahịa mmadụ-nkwalite dị oke mkpa dabere na nzaghachi ọkwa ụlọ oriri na ọ toụ toụ iji nyere ndị mmekọ aka ịmata ihe. mee ihe ma gaa n'ihu n'ọgụ megide mpụ mba dị iche iche.
Na mgbakwunye, e mepụtara ọzụzụ ọhụrụ a na mmekorita ya na ndị lanarịrị ịzụ ahịa mmadụ, na-ahụ na ọzụzụ ahụ bụ nke metụtara ndị ihe metụtara na ihe ndị dị ndụ na-agwa ndị lanarịrịnụ.
Anthony Capuano, onye isi ndị isi nke Marriott International. "Ọzụzụ emelitere na -enye ike ọrụ zuru ụwa ọnụ nke dị njikere ịmata na ịzaghachi ịzụ ahịa mmadụ ma nye ụlọ ọrụ anyị ohere ibi ndụ kwekọrọ n'ụkpụrụ anyị."
Site na mmekorita ya na ECPAT-USA yana ntinye sitere na Polaris, ndị isi abụọ na-abaghị uru nke na-ahụ maka ịlụ ọgụ maka ịzụ ahịa mmadụ, Marriott bidoro ọzụzụ mmata gbasara ịzụ ahịa mmadụ na 2016 wee mee ka ọ bụrụ iwu maka ndị ọrụ niile nọ na ụlọ ma jikwaa ma na-ekwupụta ụwa niile na Jenụwarị 2017. Ya mere Ka ọ dị ugbu a, enyefela ndị mmekọ karịrị 850,000 ọzụzụ a, nke nyere aka chọpụta ọnọdụ nke ịzụ ahịa mmadụ, chebe ndị mmekọ na ndị ọbịa, na ịkwado ndị ihe metụtara na ndị lanarịrịnụ.